alldayniie.com » Tiger Shroff iyo Prateik Babbar is bursigooda Action-ka Baaghi 2 waa mid na xasuusin doono Sunny Deol iyo SRK isbursigoodii Darr
Tiger Shroff iyo Prateik Babbar is bursigooda Action-ka Baaghi 2 waa mid na xasuusin doono Sunny Deol iyo SRK isbursigoodii Darr
Tiger Shroff iyo Prateik Babbar ayaa duubeen muuqaal Action is bursi halis ah (Chase Sequence) oo aan filimka Baaghi 2 ku daawan doono.
Waxaana la sheegay isbursiga sida heerka sare loo duubay ee Tiger iyo Prateik Babbar u dhaxeeyo inuu na xasuusin doono ama laga soo min guuriyay qaabkii Sunny Deol uu bursanaayay SRK filimkii hirgalay Darr wuxuuna ahaa isbursigaas mid ka mid ah orod ama isbursigii ugu wacnaa ebid Bollywood-ka sameeyaan.
Director Ahmed Khan ayaa dowlada Hindiya weydiistay in isbursiga Tiger Shroff iyo Prateik Babbar lagu duubo bartamaha magaalada Goa ilaa banaanka loga baxaayo magaalada waxaana la siiyay sacaado kooban.
Orodka heerka sare loo duubay ee Tiger iyo Prateik Babbar u dhaxeeyay waxaa lagu duubay 10 ilaa 12 kaamiro sidoo kalena mudo 6-maalmood ayuu qaatay sameyntiisa oo maalin walbo wadooyinka Goa saacado kooban dowlada siineesay kooxda filimkaan inay shaqadooda ku qabsadaan.
Waxaa la sheegay isbursiga Tiger Shroff iyo Prateik Babbar u dhaxeeyay inuu yahay mid gawaari laga dul boodayo, halis badana ay mareen laakiin kusoo xasuusinaayo 25-sano ka hor sidii Sunny Deol bartamaha magaalada ugu bursanaayo SRK oo ay ku adkaaneyso inuu gacanta kusoo dhigo filimkii Darr.
Tiger iyo Prateik Babbar ayaa diideen in shaqsiyaad kale (Body Double) u sameeyaan ficilkaan halista ah waxayna ku guuleestaan sameynta Action is bursi heer sare ah.
Filimka Baaghi 2 hal jadwal ayaa u dhiman waana dhamaadka filimkaan oo Thailand lagu soo duubayo waxaana tiyaatarada la saari doonaa 27 April 2018 waana filim siweyn loo sugaayo madaama qaybtiisii kowaad Hit weyn noqday.